China mveliso kunye nabathengisi
Ezi bheji zobhedu zigximfiziweyo zigcwalisiwe nge-Imitation Enamell, Ezi zikhonkwane zesiko zesiko zinemibala eqaqambileyo kwaye zinomgangatho olungileyo, ziphakanyisiwe kwaye zagqitywa ngeenkcukacha zentsimbi. Lo msebenzi wobugcisa uya kuphakamisa umgca wentsimbi, onobungqingqwa obomeleleyo bentsimbi.
Iphrinta yedijithali yelinen pin
Ezi zikhonkwane ezikumgangatho ophezulu zaseMelika singazamkela uyilo lwesiko, ukuba unoyilo lwakho usithumelele ifayile yakho yobugcisa yedijithali, siya kukopa uyilo lwakho lombala kwizikhonkwane ezikumgangatho ophezulu kwaye sizise kuwe ngexesha! iyafumaneka, siya kuqinisekisa umgangatho weemveliso kunye nexesha lokukhokelela kwimveliso.
Yongeza umxube we-flash enemibala kunye ne-eamel kwindawo yokuphumla yepini okanye ingqekembe, emva koko uyinxibe nge-epoxy dome ukukhusela umphezulu kunye nokongeza ukukhanya okuqaqambileyo.
Nokuba kukukhanya okungathethekiyo kokukhanya okukhanyayo, kwaye kongeza iintlantsi ezongezelelweyo kuyilo osele ukhanyisile ngalo. Le yinto eyimfuneko yesikolo yokuthengisa izikhonkwane!
Xa usekhonsathini, ebharini okanye kwindawo emnyama, ukhe wakubona ukukhanya kwesibane komnye umntu? le yeyona nto ithandwayo kakhulu kwiminyaka yakutshanje - izikhonkwane ze-lapel.
Ukukhanya okumnyama koqweqwe lwepinki yethu yesiko kugqibelele xa ufuna ipini yakho ibonakale kwisihlwele okanye ebumnyameni
Ukuba ujonge ekwenzeni izikhonkwane zakho zoqweqwe lwawo, mhlawumbi ubonile amagama athi "i-enamel enzima" kunye "ne-enamel ethambileyo". Abantu abaninzi banombuzo ofanayo: Uyintoni umahluko? Umahluko omkhulu phakathi koqweqwe lwawo olunzima kunye nothambileyo ngumbala ogqityiweyo. Izikhonkwane ze-enamel ezinzima zihlala zithe tyaba kwaye zigudile, kwaye izikhonkwane ze-enamel ezithambileyo ziye zaphakamisa imiphetho yesinyithi. Zombini ezi ndlela zisebenzisa ukungunda okufanayo kwesinyithi, kwaye zombini ziya kuba nemibala eqaqambileyo nenamandla. Kodwa kukho ezinye iindlela ezikhethekileyo ezikhethekileyo kwi-enamel ethambileyo.
Izikhonkwane ezihamba ngesilayidi lolunye uyilo olwahlukileyo lwezikhonkwane, ezixhotyiswe ngezixhobo ezincinci ezinokukuvumela ukuba uvule ngokulula kwaye uvale izikhonkwane. Ukuba uneelogo ezininzi, isicatshulwa kunye neeslogans ezinokuboniswa kwizikhonkwane, esi sesona sicelo sifanelekileyo kuba kukho amacala amathathu anokusetyenziselwa ukuhambisa umyalezo. Nangona lo ngumsebenzi olula okanye ingqikelelo, intshukumo echanekileyo egudileyo ifuna izakhono ezinamava, sikhethekile kwimveliso yezikhonkwane zelapel. Ezi zilandelayo zezinye eziqhelekileyo ...
Ukukhanya kwe-LED kunokuxhonywa kwi-PCB kwi-alloy ye-zinc okanye kwipini yentsimbi engenasici, kunye nokufakwa ngasemva kunokuba yi-butterfly clutch okanye umazibuthe.
Bhiyozela itheko lakho leholide kulo nyaka kunye nebheji emenyezelayo yonyaka evela kwiGlowProducts.com.
Yeyiphi eyona nto ikhethekileyo yokwenza izikhonkwane ezifakwe kwifoto ukuba ufuna izikhonkwane ezingasasebenziyo ezineenkcukacha ezicacileyo. Ezahlukileyo kwizikhonkwane zeCloisonne, ezibunjiweyo, iifoto ezixhonywe ngeLapel Izikhonkwane zenza uyilo ngokuthe ngqo kumphezulu wesinyithi ngaphandle komqolo kunye nokubumba kwentlambo. Oku kunyusa inani leenkcukacha ezinokubonisa uyilo. Siqala ukusebenzisa izixhobo ezilawulwa yikhompyuter ukuhambisa isiseko sentsimbi yoyilo lwakho. Siza ke ugcwalise umbala wokhetho lwakho kwaye usitshise ...
Jonga olu luyilo luhle kunye nokujija kwethu okungafaniyo, okufanekisela inyanga yokubona kwentliziyo, le brino ibomvu ebomvu yeyona nto intle, inesitayile kwaye iyonwabisa! Ipeyinti yokutshixa yokhuseleko ukubeka indawo efanelekileyo kuso nasiphi na isixhobo, intambo okanye umnqwazi.Ingxowa nganye yeplastiki, Makhe esi sipho sibe ngumntu okhethekileyo onesifo sentliziyo okanye siphakamise ulwazi.
Ngokungafaniyo nokufa okufayo, i-3D die-cast lapel pin ngokomzimba iphawula uphawu olusetiweyo kwinto engenanto (isinyithi esigudileyo), ngelixa i-3D die-cast lapel pin yenziwa ngokugalela isinyithi esinyibilikiweyo kuxinzelelo oluphezulu kwinto eyenziwe kwangaphambili uyilo sokubumba